सम्पादकीय – Page 128 – erupse.com
मोटरसाईकल ठक्करबाट चारदिनमा पाँच घाईते
म्याग्दी - जिल्लाको सदरमुकाम बेनीमा दैनिकजसो सडक दुर्घटना बढ्न थालेको छ । ब्यस्त सडकमा तीव्रगतिमा गुड्ने दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको ठक्करबाट चारदिनमा पाँचजना घाईते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार साउन २० गते पश्चिम म्याग्दीको ओखरबोट गाविस–१ फुलबारी स्थायी घरभई दरवाङमा..
सलाम डा. केसीलाई
केही समय पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो औपचारिक विज्ञप्तिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको मानसिक उपचार गराउन सरकारका नाममा आदेश दियो । अख्तियारको यो आदेशपछि समाजमा एक किसिमको तरंग नै पैदा भयो। आफ्ना अधिकार र कार्यक्षेत्रको कानुनी सीमा मिचेर काम..
दर्ता बिनै ईट्टा उद्योग संचालन
बागलुङ - मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता गर्ने र नगरक्षेत्र बाहिर मात्र संचालनगर्न पाउने सरकारी प्रवाधान विपरित बागलुङमा अझैपनि दर्जनौं ईटाभट्टी संचालनमा छन् । घरेलु तथा साना उद्य्रोग विकास समितिमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि अहिले सम्म कुनैपनि इटा उद्य्रोग दर्ता नभएको हो । समितिको मुख्य..
नागरिकको सेवामा तल्लिन हुनुपर्ने ब्यक्ति राजनैतिक स्वार्थमा हिड्दा थुप्रै समस्या सिर्जना भएका छन । यसले केही राजनैतिक ब्यक्तिलाई हित गरे पनि समग्र राष्ट्रलाई भने नोक्सान नै भएको आंकलन गर्न कठिन मान्नुपर्ने अवस्था छैन् । यसलाई दृष्टिगत गरेर नै होला निजामती प्रशासनको उच्च नेतृत्वले राष्ट्रसेवक..